Mpanamboatra sy mpamatsy SARS-CoV-2 - Orinasa SARS-CoV-2 Sina
Fandraisana mpiasa mpizara
Torolàlana ho an'ny horonan-tsary
Kit antigen an'ny SARS-CoV-2
Fitsapana haingana ny SARS-CoV-2 IgG / IgM
Fitsapana Vaginosis bakteria
Strep B Antigen Fitsapana
Strep fitsapana haingana
Fitsapana antigen Cryptococcal
Fitsapana antigen HSV 1/2
Fitsapana ny fizahana mialoha ny homamiadan'ny vozon'ny tranonjaza sy ny homamiadana
Fitsapana Rotavirus / Adenovirus
Fitsapana Salmonella Typhi
Fitsapana Vibrio Cholerae O1 / O139
Fitsapana Vibrio Cholerae O1
Fitsapana H. Pylori Antigen
Fitsapana Antibody H. Pylori
Zaza & Bevohoka
Fitsapana haingana PROM
Fitsapana haingana an'i Fetib Fibronectin
Vahaolana fandokoana fluorescence
Fitsapana haingana FOB
Fampahalalana momba ny vokatra
Fitaovana Dual Biosafety System ho an'ny SARS-CoV-2 Antigen ...
Fitsapana haingana an'ny antigen an'ny SARS-CoV-2
Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Kit PCR Multiplex tena izy
Ny virus coronavirus dia virus RNA, izay misy proteinina sy asidra niokleika. Manafika ny vatan'ny mpampiantrano (olombelona) ny viriosy, miditra amin'ny sela amin'ny alàlan'ny receptor ACE2 mifandraika amin'ny tranonkala mifamatotra, ary mamerina ao amin'ny sela mpampiantrano, ka mahatonga ny hery fiarovan'ny olombelona hamaly ireo mpanafika avy any ivelany ary hamokatra antibiotika manokana. Noho izany, ny asidra niglikaly vial sy ny antigène, ary ny antibodies manokana manohitra ny coronavirus vaovao dia azo ampiasaina amin'ny maha-biomarker manokana azy amin'ny fikarohana ny coronavirus vaovao. Ho an'ny fitiliana asidra nokleôma, ny teknolojia RT-PCR no be mpampiasa indrindra.
Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit dia natao hampiasaina hahitana ny mari-pahaizana kalitaon'ny RNA viralin'ny SARS_CoV-2 nalaina avy amin'ny swabs nasofaryngeal, swabs orofaryngeal, sputum ary BALF avy amin'ireo marary miaraka amin'ny FDA / CE Rafitra fitrandrahana IVD sy ireo sehatra PCR voatondro voalaza etsy ambony.
Ny kit dia natao hampiasain'ny mpiasa voaofana amin'ny laboratoara
Fitsapana haingana momba ny antibiotika SARS-CoV-2 IgM / IgG
The StrongStep® SARS-CoV-2 IgM / IgG Antibody Rapid Test kit ampiasaina amin'ny detection qualitative qualitative sy ny famantarana ny aretina SARS-CoV-2 antibody coronavirus COVID-19 ao amin'ny serum / plasma / santionan'ny ra iray manontolo (ao anatin'izany ny rà mahery vaika sy ny rantsan-tànana) ny marary ahiahiana dia azo ampiasaina ny famaritana ny aretina mba hamaritana ireo olona simtimika na tsy misy soritr'aretina izay voan'ny aretina mahery vaika sy fizahana molekiola na fampahalalana momba ny klinika.
Ny fitsapana dia voafetra any Etazonia hizarana amin'ireo laboratoara voamarin'ny CLIA mba hanaovana fitiliana be pitsiny.
Ity fitsapana ity dia tsy nodinihan'ny FDA.
Ny valiny ratsy dia tsy manakana ny aretina SARS-CoV-2 maranitra.
Ny valin'ny fitsapana antibody dia tsy tokony hampiasaina hamantarana na hanilihana ny aretina SARS-CoV-2 mahery.
Ny valiny tsara dia mety vokatry ny aretina taloha na ankehitriny amin'ny tsindry coronavirus tsy SARS-CoV-2, toy ny coronavirus HKU1, NL63, OC43, na 229E.
Ny fitaovana Dual Biosafety System ho an'ny fitsapana Antigen SARS-CoV-2 dia ampiasaina amin'ny fitiliana kalitao an'ny coronavirus (SARS-CoV-2) antigococidid (N) antigen ao amin'ny santionan'ny fikorontanan'ny olombelona Throat / Nasopharyngeal in vitro. Ny kit dia tokony hampiasaina ho toy ny mari-pamantarana fanampiny na ampiasaina miaraka amin'ny fikarohana asidra nokleika amin'ny famaritana ireo tranga ahiahiana COVID-19. Izy io dia tsy azo ampiasaina ho fototra tokana amin'ny famaritana sy fanilihana ireo mararin'ny pnemonitis voan'ny virus coronavirus, ary tsy mety amin'ny fizahana ny besinimaro. Ireo kitapo dia tena mety ampiasaina amin'ny fizahana arak'asa lehibe any amin'ny firenena sy ny faritra izay miparitaka haingana ny valanaretina coronavirus, ary amin'ny fanomezana diagnostika sy fanamafisana ny aretina COVID-19.
ZAVA-DEHIBE: Ity vokatra ity dia entina hampiasaina amin'ny PROFESSIONAL IHANY, TSY ho an'ny fanandramana samirery na fitsapana ao an-trano!
Fitaovana Dual Biosafety System ho an'ny fitsapana haingana an'ny SARS-CoV-2 Antigen
Ny fitaovana Dual Biosafety System ho an'ny fitsapana Antigen SARS-CoV-2 dia ampiasaina amin'ny fitiliana kalitao an'ny coronavirus (SARS-CoV-2) antigococidid (N) antigen ao amin'ny santionan'ny fikorontanan'ny olombelona Throat / Nasopharyngeal in vitro. Ny kit dia tokony hampiasaina ho toy ny mari-pamantarana fanampiny na ampiasaina miaraka amin'ny fikarohana asidra nokleika amin'ny famaritana ireo tranga ahiahiana COVID-19. Izy io dia tsy azo ampiasaina ho fototra tokana amin'ny famaritana sy fanilihana ireo mararin'ny pnemonitis voan'ny virus coronavirus, ary tsy mety amin'ny fizahana ny besinimaro. Ireo kitapo dia tena mety ampiasaina amin'ny fizahana arak'asa lehibe any amin'ny firenena sy ny faritra izay miparitaka haingana ny valanaretina coronavirus, ary amin'ny fanomezana diagnostika sy fanamafisana ny aretina COVID-19. Ny fitsapana dia voafetra amin'ny laboratoara voamarina eo ambanin'ny fitsipiky ny tompon'andraikitra nasionaly na eo an-toerana.
Fitaovana rafitra ho an'ny fitsapana haingana Combo Antigen Rapotra SARS-CoV-2 & Influenza A / B
Ny fitaovana SystemStep® ho an'ny SARS-CoV-2 & Influenza A / B Combo Antigen Rapid Test dia mampiasa fitsapana fitetezana chromatographic lateral. Misy tsipika telo ao amin'ilay fitaovana izay mamantatra ny SARS-CoV-2, ny gripa A ary ny gripa gripa B, ny Latex conjugated antibody (Latex-Ab) mifandraika amin'ny SARS-CoV-2 / Flu A / Flu B dia maina tsy mihetsika ao ny faran'ny tsipika membrane nitrocellulose tsirairay. Ny antibodies SARS-CoV-2 / Flu A / Flu B dia mifamatotra ao amin'ny Zone Test (T) ary ny Biotin-BSA dia mifamatotra amin'ny Zone Control (C) isaky ny tsipika. Rehefa ampiana ny santionany dia mifindra amin'ny alàlan'ny fanaparitahana capillary rehydrating ny latex conjugate izy. Raha misy amin'ny santionany, ny antigère SARS-CoV-2 / Flu A / Flu B dia hamatotra ireo antikôlôjika mitambatra kely mifangaro
Zon'ny mpamorona © 2016-2020: Voatahiry ny Zo rehetra. Vokatra mafana - Sitemap
Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Fitsapana haingana, H. Pylori Ag Rapid Test dia mamantatra ny antigen, Kitapo fitsapana Igm / Iggrapid, Kitapo fitsapana antigona Coronavirus, Coronavirus ho an'ny fitsapana Covid-19, Fitsapana haingana momba ny Coronavirus Ket,